XOG LA HELAY: Puntland oo isbedel ku sameynaysa Guddiga Nabadgalyadda ee G Barri & qorshe cusub. – Puntlandtimes
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweyne kuxigeenka Punland ahna Kusimaha Madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan ayaa qorsheynaya Isbedel maamul oo lagu sameeyo gobalka Barri, markii ilaa hadda dawladdu ku guuldareysatay wax ka qabashada falalka xagga amaanka ah ee magaalada Boosaaso ka taagan.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo saacadihii lasoo dhaafay kulamo kala gedisan la yeeshay xubnaha maamulka gobalka iyo kan degmada oo ay ka wada hadleen arrimaha Ammaanka ayaa sheegaya in uu hada qorsheynayo isbedel maamul.
Mr, Karaash ayaa la sheegay in uu si cad u sheegay in lama huraan tahay in la helo dhiig cusub oo wax ka qabta ammaanka Boosaso, wuxuuna ku dhaliilay xubnaha dawladda ee horey u joogay in aysan waxba qaban, taas bedelkeedana ay jireen dhibaatooyin ay qeyb ka ahaayeen.
Gudoomiyaha gobalka Barri, ayay wararku sheegayaan in xilka laga qaadi doono, iyadoo lagu bedelayo mid kamid ah siyaasiinta sida aadka ah looga yaqaano magaalada Boosaaso, waxaana ilaa hadda soo baxaya magacyo kala duwan.
Mr, Dhedo wuxuu xilkan hayay mudo dheer, isagoo marar badan ka badbaaday weeraro Argagixiso, sidaas oo kale waxaa lagu tilmaamaa nin go`aan adag oo si rasmi ah uga dhabeyn kara qorshihiisa siyaasadeed, balse caqabadaha xagga ammaanka ah ayaa ka dhigan kuwa sii kordhaya.
Dawladda Puntland ayaa ilgaar ah lagu hayaa sida ay u maareyso ammaanka gobalka Barri, waxaana caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaysaa ay ka mid yihiin arrimaha dilalka qorsheysan sidii ay talaabo cad uga qaadi lahayd.